Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Djibouti oo ku baaqey in la joojiyo colaadda gobolka Hiiraan – Radio Muqdisho
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Djibouti Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si wadajir ah baaq nabadeed iyo in colaadda la joojiyo u jeediyey maamulka , odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Labada madaxweyne ayaa baaqan jeediyey mar ay booqasho gaaban ku tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhowaanahan aafeeyey dagaalo u dhexeeya beelo iska soo horjeeda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inan la joogin xilli dhiig micno darro la daadiyo, wax kasta oo la isku haystana lagu xalin karo wadahadal .
“ Waa nasiibdarro in weli aad xal kama dambeys ah u heli weyseen colaaddan soo noqnoqotey. Waa markii afraad ee aan halkan idinkugu imaado anigoo wada fariin nabadeed. Haddana waxan mar kale idin leeyahay nabadda degdeg ha loo qaato. Ciidammada AMISOM ee halkan idin la jooga waxay idin ka saacidi karaan oo keliya inaad isku timaaddaan oo aad wadahadashaan, balse go’aanka kama dambeysta ah idinka ayaa iska leh oo baajin kara dhiig mar kale si micno darro ah ku daata”.
Madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho laba maalmood qaadatey ku jooga Soomaaliya, ayaa isna baaq nabadeed oo kaa la mid ah halkaasi ka jeediyey, isagoo xusey sida uu uga xun yahay dhiigga dadka walaalaha ah ee weli ku daadanaya gobolka Hiiraan oo uu ku tilmaamey goob fac weyn oo taariikh muhiim ah ku leh Soomaaliya.
“Markii aan qaatey go’aanka aan ciidanka ugu soo dirayo Soomaaliya, gaar ahaan degaannadan waxaa ujeeddadu ay ahayd inay gacan idin ka siiyaan si aad dhibaatada uga baxdaan nabaddana loo sugo. Laakiin waxaa wax laga xumaado ah in dadka degaanka ay dhexdooda isku jeestaan oo dhiig daadiyaan. Joojiya dagaalka, anigoo filayaa inaad qaadan doontaan taladeyda. Waxan doonayaa in marka aan ku laabto Djibouti aan shacabkeyga ku soo wargeliyo inaad nabad qaadateen. Gacan ayaan sidoo kale ka geysan doonaa baahiyada kala duwan ee ka jira gobolka haddii aad nabadda qaadataan’’, ayuu yiri Madaxweyne Geelle.
Labada Madaxweyne ayaa sidoo kale la hadley ciidammada Djibouti ee ka tirsan AMISOM ee jooga Beledweyne, waxayna ku ammaaneen shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan gobolka Hiiraan iyo degaannada ku xeeran.
Wafdiga labada madaxweyne ayaa safarkaasi kadib ku soo laabtey magaalada Muqdisho.
Daawo sawirada Madaxweyniyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo booqday Beledweyne